UTORRENT ANAGHỊ AMALITE - UTORRENT - 2019
Idozi nsogbu na mbido nke uTorrent
Mgbe ị na - arụ ọrụ na onye na - enye gị ohere, ọnọdụ na - ebili mgbe usoro ahụ achọghị ịmalite ma ọ bụ site na ụzọ dị mkpirikpi ma ọ bụ ozugbo site na ịpị ugboro abụọ na faịlụ iberibe uTorrent.exe.
Ka anyị nyochaa isi ihe mere uTorrent adịghị arụ ọrụ.
Ihe mbụ na ihe kpatara ya bụ mgbe ejiri ngwa ahụ mechie. uTorrent.exe nọgidere na-adabere na njikwa ọrụ, nke abụọ (na echiche nke uTorrent) anaghị amalite.
N'okwu a, ị ga-eji aka gị mezue usoro a site n'aka onye njikwa ọrụ,
ma ọ bụ jiri akara iwu na-agba ọsọ dịka onye nchịkwa.
Otu: TASKKILL / F / IM "uTorrent.exe" (nwere ike idetuo na mado).
Ụzọ nke abụọ dị mma, ebe ọ na-enye gị ohere ịchọta aka gị n'etiti ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke usoro dị mkpa.
O kwesiri ighota na obughi mgbe o kwere omume "igbue" usoro siri ike ma oburu na ugwo agwaghi ya. Na nke a, enwere ike ịchọtagharịa. Ma, ọ bụrụ na a haziri onye ahịa ịkwalite na sistemụ arụmọrụ, mgbe ahụ, ọnọdụ ahụ nwere ike iweghachi.
Ihe ngwọta bụ iwepụ ihe omume ahụ site na mbido site na iji ọrụ ọrụ. msconfig.
A na-akpọ ya dị ka ndị a: pịa WIN + R na window nke meghere na nkuku aka ekpe nke ihuenyo, tinye msconfig.
Gaa taabụ "Mmalite", chọpụtakwa uTorrent ma na-atụgharị "Tinye".
Anyị wee maliteghachi ụgbọ ala ahụ.
Na n'ọdịnihu, mechie ngwa ahụ site na menu "Njikwa - Wepụ".
Tupu ịme usoro ndị a, chọpụta na usoro ahụ uTorrent.exe adịghị agba ọsọ
Ihe ọzọ kpatara ya bụ ntọala ndị ahịa "gbagọrọ agbagọ." Site na enweghị atụ, ndị ọrụ gbanwere ọ bụla, nke, n'aka nke ya, nwere ike iduga nkwụsị ngwa.
Na nke a, ịtọgharị usoro ihe omume ahụ na ndabara kwesịrị inyere aka. Emere nke a site n'ihichapụ faịlụ. settings.dat ma settings.dat.old site na folda ya na onye nlekọta ya (ụzọ na nseta ihuenyo).
Ntị! Tupu ihichapụ faịlụ, mee ka ha chekwaa ndabere (denye ebe ọ bụla)! Nke a dị mkpa iji weghachite ha n'ọnọdụ ha ma ọ bụrụ na ha emee mkpebi na-ezighi ezi.
Nhọrọ nke abụọ bụ ihichapụ faịlụ ahụ. settings.datma settings.dat.old nyegharịa aha na settings.dat (echefula banyere backups).
Nsogbu ọzọ maka ndị ọrụ na-enweghị uche bụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mmiri na ndepụta ndị ahịa, nke nwekwara ike iduga n'eziokwu na uTorrent freezes na mmalite.
Na ọnọdụ a, ihichapụ faịlụ ga-enyere aka. resume.dat ma resume.dat.old. Ha nwere ihe omuma gbasara ibudata ma keta oke.
Ọ bụrụ na agbanyeghị nsogbu a, enwere nsogbu na-agbakwunye iyi ọhụrụ, weghachite faịlụ ahụ resume.dat n'ime ebe. Emekarị nke a anaghị eme ma ihe omume ahụ na-emepụta ihe ọhụrụ mgbe ọ gachara.
Ọzọkwa, enwere ike ịnwe ntụziaka na-enweghị atụ maka ịtinye usoro ihe omume ahụ, na-emelite na nsụgharị ọhụrụ ma ọ bụ ọbụna na-agbanyekwuru onye ahịa mmiri ọzọ, ka anyị kwụsị ebe ahụ.
Nsogbu kachasị na mmalite nke uTorrent anyị bibiri taa.
https://termotools.com ig.termotools.com © UTorrent 2019